တရုတ်ထုတ် ကိုဗစ် Test Kits များ အရည်သွေးမမှီ အပြစ်အနာဆာများ တွေ့ရှိသောကြောင့် အိန္ဒိယ ဝယ်ယူမှု ပယ်ဖျက်လိုက် – Na Pann San
တရုတ်နိုင်ငံ မှ ထုတ်လုပ်သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာများတွေမှာ အပြစ်အနာအဆာ တွေ့တာကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အဲဒီ စမ်းသပ်ကိရိယာ သန်းဝက်ခန့် ဝယ်ယူတင် သွင်းမှု ကို ပယ်ဖျက်လိုက် ပါတယ် ။ တရုတ် စမ်းသပ်ကိရိယာတွေကို ပြည်နယ်အချို့မှာ အသုံးပြုနေတာကိုလည်း ပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ စမ်းသပ်ကိရိယာတွေဟာ စစ်ဆေးချက် ရလဒ်ကို မိနစ် ၃၀ အတွင်း ထုတ်ပေးပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရဖွယ်ရှိသောသူရဲ့ သွေးတွင်း ပဋိပစ္စည်းကို ထောက်လှမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကိရိယာတွေနဲ့ အထူးပြုဒေသတွေမှာ ကူးစက်မှု အတိုင်းအတာကို တာဝန်ရှိသူတွေ လျင်လျင်မြန်မြန် နားလည်သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
A health worker takesaswab test ataCOVID-19 testing center in New Delhi on Monday. India’s main medical research organization has canceled orders to procure rapid antibody test kits from two Chinese companies.
တရုတ်ရဲ့ စမ်းသပ်ကိရိယာတွေမှာ အပြစ်အနာအဆာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယဖက်က ပြောဆိုချက်ကို တရုတ်က ပယ်ချပါတယ်။ “တရုတ်နိုင်ငံကနေ တင်ပို့တဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေဟာ အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ထုတ်ကုန်တွေကို အပြစ်အနာဆာ ရှိတယ်ဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်တာဟာ မျှတမှု မရှိဘဲ တာဝန်မဲ့တာပဲ ဖြစ်တယ်။”လို့ တရုတ်သံရုံး ပြောခွင့်ရသူ ကျိရောင်က အင်္ဂါနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။
အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာတွေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို မထောက်လှမ်းနိုင်ဘဲ ရောဂါဖော်ထုတ်ရာမှာ အဲဒီ ကိရိယာတွေကို အသုံးပြုနေတာအပေါ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်မားလျက် ရှိနေပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ စမ်းသပ်ကိရိယာ လုံလုံလောက်လောက် မရှိတဲ့ ပူပန်နေရတဲ့ကြားမှာ တရုတ်ရဲ့ အဲဒီ အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာတွေကို သုံးခွင့်ပြုရန်ဖို့ ပြည်နယ်တော်တော်များများက အိန္ဒိယဆေးဝါးသုတေသနကောင်စီ ICMR အား တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ICMR ဟာ အစောပိုင်းမှာ တွန့်ဆုတ်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုက ထုတ်လုပ်တဲ့ အဲဒီ စမ်းသပ်ကိရိယာတွေ တင်သွင်းတာကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတျနိုငျငံ မှ ထုတျလုပျသော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အမွနျစမျးသပျကိရိယာမြားတှမှော အပွဈအနာအဆာ တှတေ့ာကွောငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ အဲဒီ စမျးသပျကိရိယာ သနျးဝကျခနျ့ ဝယျယူတငျ သှငျးမှု ကို ပယျဖကျြလိုကျ ပါတယျ ။ တရုတျ စမျးသပျကိရိယာတှကေို ပွညျနယျအခြို့မှာ အသုံးပွုနတောကိုလညျး ပွနျလညျသိမျးယူခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ စမျးသပျကိရိယာတှဟော စဈဆေးခကျြ ရလဒျကို မိနဈ ၃၀ အတှငျး ထုတျပေးပွီး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံထားရဖှယျရှိသောသူရဲ့ သှေးတှငျး ပဋိပစ်စညျးကို ထောကျလှမျးတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ကိရိယာတှနေဲ့ အထူးပွုဒသေတှမှော ကူးစကျမှု အတိုငျးအတာကို တာဝနျရှိသူတှေ လငျြလငျြမွနျမွနျ နားလညျသိရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျရဲ့ စမျးသပျကိရိယာတှမှော အပွဈအနာအဆာတှေ ရှိနတေယျဆိုတဲ့ အိန်ဒိယဖကျက ပွောဆိုခကျြကို တရုတျက ပယျခပြါတယျ။ “တရုတျနိုငျငံကနေ တငျပို့တဲ့ ဆေးဝါးဆိုငျရာ ထုတျကုနျတှဟော အရညျအသှေးကို ဦးစားပေးတာ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျ ထုတျကုနျတှကေို အပွဈအနာဆာ ရှိတယျဆိုပွီး တံဆိပျကပျတာဟာ မြှတမှု မရှိဘဲ တာဝနျမဲ့တာပဲ ဖွဈတယျ။”လို့ တရုတျသံရုံး ပွောခှငျ့ရသူ ကြိရောငျက အင်ျဂါနေ့ ထုတျပွနျခကျြမှာ ပွောထားပါတယျ။
အမွနျစမျးသပျကိရိယာတှကေ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို မထောကျလှမျးနိုငျဘဲ ရောဂါဖျောထုတျရာမှာ အဲဒီ ကိရိယာတှကေို အသုံးပွုနတောအပျေါ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ စိုးရိမျမှုတှေ မွငျ့မားလကျြ ရှိနပေါတယျ။ အိန်ဒိယမှာ စမျးသပျကိရိယာ လုံလုံလောကျလောကျ မရှိတဲ့ ပူပနျနရေတဲ့ကွားမှာ တရုတျရဲ့ အဲဒီ အမွနျစမျးသပျကိရိယာတှကေို သုံးခှငျ့ပွုရနျဖို့ ပွညျနယျတျောတျောမြားမြားက အိန်ဒိယဆေးဝါးသုတသေနကောငျစီ ICMR အား တှနျးအားပေးခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ICMR ဟာ အစောပိုငျးမှာ တှနျ့ဆုတျနပေမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ တရုတျကုမ်ပဏီနှဈခုက ထုတျလုပျတဲ့ အဲဒီ စမျးသပျကိရိယာတှေ တငျသှငျးတာကို ပယျဖကျြဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။